I-Semalt Expert ichaza iintlobo ezine zeeWebPop Sites
Ukuba nobukho bakho kwi-intanethi kunokunceda uphawu lwakho luzithembeke kwaye luya kukwandisa ixabiso kunye nedumela phambi kwabathengi abanakho. Ukuba ungumntu ekuzingeleni umsebenzi, unokufuna ukuba nezinga eliphambili lempumelelo enokwenzeka nge-portfolio. Kukhuselekile ukuthetha ukuba i-WordPress yisisombululo esona sihle kakhulu kwaye sikulungele kuzo zonke iingxaki zakho kwi-intanethi. Ukuba ufuna ukwenza ubukho bakho buyaziwa kwi-intanethi, i-WordPress iya kwenza njenge-akin kwenkampani yezokwakhiwa kwaye izokunceda nayiphi na into kwiindawo ezilula ukuya kumawebhsayithi ewebhu.
U-Oliver King, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt , ukhangeleka kwiindawo ezine eziphambili ezinokwakha ngokulula kunye ne-WordPress kunye nezinye izixhobo eziza kukunceda wenze indawo engabonakaliyo kwaye ingabonakali - avventura giochi. 10)
1. iiCommerce websites
Indlu yeWhiskey yindawo ethengisa iWhisky yaseScotland, kwaye yakhelwe kwi-WordPress. Iinkalo ezahlukeneyo ze-e-commerce zenziwa ngenxa ye-WordPress. Ukuba unayo inkampani e-Amazon kwaye ufuna ukuvumela ihlabathi ukuba likwazi ngayo, i-Wordpress yindlela ekhethekileyo kuwe njengoko kuya kukunceda ufikelele kwinani elikhulu labantu. I-Amazon yinkampani efanelekileyo kwi-intanethi eqhutywa yinto engekho ngaphandle kweWoCommerce, kwaye ukuyila kwayo kusekelwe kwi-Divi WordPress ekhethekileyo. I-WooCommerce i-plugin eyiyo yi-Automattic, kwaye inempahla yamagcino. Le plugin ikhona kwiWindowsPress yakho kwaye ingafakwa ngaphandle kwexesha. Unalo uluhlu olubanzi lwezinto ezikhethiweyo kunye neempawu, zombini zihlawulwe kwaye zikhululekile. Enye into ongazama ngayo i-Easy Digital Downloads kunye neThemes Exchange..Kukukunceda uhlakulele ivenkile ye-intanethi usebenzisa i-akhawunti yakho ye-WordPress. Awufanele ulibale ukuyilawula ngeWoCommerce malunga neenkcukacha ezininzi kunye neenketho.
2. Iwebhusayithi yezoshishino
Ukuba ufuna inkampani eneenkcukacha eziphezulu okanye indawo yezoshishino njengeMercedes-Benz, i-WordPress yindlela efanelekileyo kuwe. Le nkampani yokuvelisa imoto yakhetha i-WordPress ibe yinto yamanye amazwe angcono kwihlabathi. Kuye kwagqitywa ngokugqithiseleyo okubonakalayo kwaye kwabonisa inani elikhulu lezithuthi ukubandakanya abasebenzisi abaninzi nangaphezulu. Iwebhusayithi yayo ineempawu eziqhelekileyo eziqhelekileyo ezidibeneyo kunye neenqwelo zabo. Yinyani ukuba i-WordPress inomqolo omkhulu weeplagi, ongazisebenzisa ukudala uqhagamshelana nathi kwifomu, iifayile zesithombe, izigaba ze-FAQ kunye nabanye .
3. Iingxelo zeendaba
Iimpapasho zeendaba ezifana ne-CNN kunye ne-MTV News zanyula i-WordPress kwii-newsstand ze-intanethi. Zombini zezi ziza zinabameli abaninzi kwihlabathi kwaye ziyaziwa ngeendawo zabo ezihlukeneyo kunye namaqonga. I-MTV idlala isitayela esimangalisayo kwaye ilungiselela iposi yayo ngokukhethekileyo. Kuyafana nemeko ne-CNN. Umxholo abakhethiweyo ubonisa iimpawu ezisisiseko zezinto ezizicwangcisiweyo zanamhlanje, apho imifanekiso kunye nomxholo ukudibanisa ngokungenasiphelo. Nge-WordPress, unokwenza ii-sites ezifanayo ngokulula kwaye usebenzise iiplagizi zayo kwiipota zeendwendwe, ibhokisi yombhali, ukwabelana ngemidiya yoluntu kunye neminye imisebenzi. I-IssueM yiyona iplasgin engcono ukufumana ezi zinto zenziwe.
4. Uluntu lwasekuhlaleni
Kumele ukuba uve ngeCuisine eKhe. Le yindawo apho abathandi bezinto zokutya beza baze bahlanganyele zabo zokupheka kwi-intanethi baze baxoxe ngokutya kwabo. Le sayithi isebenza phezulu kwi-BuddyPress, iplagi ye-WordPress evulekile ephuhlisiwe kwaye iqaliswe yi-Automattic. Le iplagi inikezela yonke into abantu abayifunayo ukuqala ngamajelo asekuhlaleni. Ungakwazi ukudala lula uluntu oluxhomekeke kwi-intanethi usebenzisa le plugin kwaye ubandakanye abafundi abaninzi nangaphezulu.